.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Website, Blog များကို Apk လုပ်နည်း
Website, Blog များကို Apk လုပ်နည်း
ဒီနောက်ပိုင်း Android ဖုန်းတွေ အသုံးများလာတော့ မိမိရဲ့ Website, Blog တွေကို Android App အဖြစ်ဖန်တီးပြုလုပ်
ပြီးတော့ တင်ပေးကြပါတယ်။ ကိုယ့်ဆိုဒ်ကို အမြဲလာဖြစ်တဲ့ သူတွေအနေနဲ့ အဲဒီကိုယ် လုပ်ပေးထားတဲ့ Apk လေးကို
Install လုပ်ပြီး အင်တာနက်သုံးပြီး တစ်ခါဖွင့်ထားလိုက်တာနဲ့ နောက်တစ်ခါကို Off line ကနေ ဖတ်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကိုယ့်ဆိုဒ်ကို သပ်သပ်လာစရာမလိုတော့ပဲ ကိုယ်အမြဲသုံးနေတဲ့ ဖုန်းကနေ အလွယ်တကူ ဖတ်လို့ရတာပေါ့။
အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့် Blog လေးကို အမြဲ လာလည်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Android App လေးတစ်ခု
လုပ်ပေးရင် ကောင်းမယ်ဆိုပြီး စဉ်းစားမိတာနဲ့ Website, Blog များကို Apk လုပ်နည်း ဆိုတဲ့ EBook လေး တွေ့တာနဲ့
သေချာဖတ်ပြီး လုပ်လိုက်တာ အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကိုယ်ပိုင် Website, Blog လေးတွေ လုပ်ထားကြတဲ့
သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ကျွန်တော် ဒေါင်းထားတဲ့ Ebook လေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်။
Download: Website, Blog များကို Apk လုပ်နည်း
ကျွန်တော့် Blog လေးကို လာလည်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Android ဖုန်းတွေကနေ ဖတ်ဖို့ကိုတော့ အောက်မှာ
ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ Screenshot လေးတွေရော ပြပေးထားပါတယ်။ Logo က ကိုယ်တိုင် လုပ်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် Blog လေးကို ဖုန်းတွေကနေ အလွယ်တကူ ဖတ်လို့ ရတယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်။
Download: IT WEB CRAZY BOY Android App
Website, Blog များကို Apk လုပ်နည်း မူရင်းလင့်ကတော့ ဒီနေရာလေးကပါ။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ..။
Posted by Thurainlin at 06:07
Labels: Blog, Software, Website, နည်းပညာ